Nhau - IEA chirevo: Global PV inowedzera 156GW muna 2021!200GW muna 2022!
Nharembozha: +86 13459204925
Solar Landscape Chiedza
Ceilling Solar Chiedza
Solar CCTV Chiedza
Inotakurika Solar System
Led Mwenje Bulb
Chirevo cheIEA: Global PV inowedzera 156GW muna 2021!200GW muna 2022!
Sangano reInternational Energy Agency (IEA) rakataura kuti kunyangwe mitengo yezvinhu ichikwira uye mitengo yekugadzira iri kukwira, budiriro yepasi rose solar photovoltaic gore rino ichiri kutarisirwa kuwedzera ne17%.
Munyika dzakawanda pasi rose, mapurojekiti ezuva anoshandiswa anopa mutengo wakaderera wemagetsi matsva, kunyanya panyaya yekukwira kwemitengo yegasi.IEA inofanotaura kuti muna 2021, 156.1GW yekuisa photovoltaic ichawedzerwa pasi rose.
Izvi zvinomiririra rekodhi nyowani.Kunyange zvakadaro, nhamba iyi ichiri yakaderera pane imwe budiriro uye kuisirwa tarisiro.Sangano rekutsvagisa BloombergNEF rinofanotaura kuti 191GW yesimba idzva rezuva ichaiswa gore rino.
Kusiyana neizvi, IHS Market inofungidzirwa solar yakaiswa simba muna 2021 ndeye 171GW.Chirongwa chekusimudzira chepakati chakakurudzirwa nesangano rekutengesa SolarPower Europe i163.2GW.
IEA yakataura kuti musangano wekushanduka kwemamiriro ekunze weCOP26 wakazivisa chinangwa chakanyanya chesimba rakachena.Nekutsigirwa kwakasimba kwemitemo yehurumende uye zvibodzwa zvesimba rakachena, solar photovoltaic "inoramba iri sosi yesimba rekuvandudza simba rekukura."
Maererano neshumo, ne 2026, simba rinogadziriswa richaita inenge 95% yepasi rose simba rekuwedzera, uye solar photovoltaic chete ichaita inopfuura hafu.Iyo yakazara yakaiswa photovoltaic simba ichawedzera kubva pa894GW gore rino kuenda ku1.826TW muna 2026.
Pasi pechirevo chekusimudzira kukurumidza, pasi rose solar photovoltaic gore negore simba idzva richaramba richikura, richisvika panosvika 260 GW panosvika 2026. Misika mikuru yakadai seChina, Europe, United States, neIndia ine mazinga makuru ekukura, nepo misika iri kusimukira yakadai se. sub-Saharan Africa neMiddle East inoratidzawo kukura kwakawanda.
VaFatih Birol, Executive Director veIEA, vakati gore rino kuwedzera kwesimba rinodzokororwa kwakaisa rekodhi, izvo zvinoratidza kuti chimwe chiratidzo chiri kubuda muhupfumi hutsva hwepasi rose.
"Kukwira kwemitengo yezvinhu nemagetsi kwatinoona nhasi kunopa matambudziko matsva kuindasitiri yemagetsi anogona kudzokororwa, asi kukwira kwemitengo yemafuta emafuta egotsi kunoitawo kuti magetsi akwirezve akwikwidze."
IEA yakakurudzirawo hurongwa hwekusimudzira.Chirongwa ichi chinofungidzira kuti hurumende yakagadzirisa matambudziko ekubvumidza, kubatanidzwa kwegridi, uye kushomeka kwemuhoro, uye inopa yakanangwa tsigiro yegwaro rekuchinja.Zvinoenderana nechirongwa ichi, 177.5GW ye solar photovoltaic ichaendeswa pasi rose gore rino.
Kunyange zvazvo simba rezuva riri kuramba richikwira, mapurojekiti matsva emagetsi emagetsi anotarisirwa kunge ari mashoma zvikuru pane nhamba inodiwa kuzadzisa zvinangwa zvepasi rose net-zero emission pakati pezana rino ramakore.Zvinoenderana nechinangwa ichi, pakati pa2021 na2026, avhareji yekukura kwesimba rinodzokororwa remagetsi kugadzirwa ingangoita kaviri iyo yemamiriro makuru anotsanangurwa mumushumo.
Chirevo chemureza cheWorld Energy Outlook chakaburitswa neIEA muna Gumiguru chinoratidza kuti muIEA's 2050 net zero emission roadmap, avhareji yepasi rose yekuwedzera kwegore resolar photovoltaics kubva 2020 kusvika 2030 ichasvika 422GW.
Kukwira kwemutengo kwesilicon, simbi, aluminium, uye mhangura chinhu chisingafadzi pamitengo yezvinhu.
IEA yakataura mumushumo wazvino kuti pari zvino, kukwira kwemitengo yezvinhu kwawedzera kudzvanywa kwemitengo yekudyara.Kugoverwa kwezvinhu zvakasvibiswa uye kukwira kwemitengo yemagetsi mune mamwe misika kwakawedzera mamwe matambudziko kune vanogadzira solar photovoltaic munguva pfupi.
Kubva kutanga kwa2020, mutengo we photovoltaic-grade polysilicon yakawedzera kudarika kana, simbi yakawedzera ne50%, aluminium yakawedzera ne80%, uye mhangura yakawedzera ne60%.Pamusoro pezvo, mitengo yekutakura zvinhu kubva kuChina kuenda kuEurope neNorth America yakakwirawo zvakanyanya, mune zvimwe zviitiko nekagumi.
IEA inofungidzira kuti zvinhu uye mutengo wekutakura unotora chikamu che15% chemutengo wakakwana wekushandisa solar photovoltaic investment.Zvinoenderana nekuenzanisa kweavhareji mitengo yezvinhu kubva muna 2019 kusvika 2021, iyo yese mari yekudyara yeutility photovoltaic magetsi zvidyarwa inogona kuwedzera ne25%.
Kukwira kwezvinhu uye kutakura zvinhu kwakanganisa mitengo yekondirakiti yematenda ehurumende, uye misika yakaita seSpain neIndia yaona mitengo yekondirakiti yakakwira gore rino.IEA yakataura kuti kukwira kwemutengo wemidziyo inodiwa kumagetsi emagetsi ephotovoltaic kunopa dambudziko kune vanogadzira vakakunda kubhidha uye vanotarisira kuenderera kuderera kwemitengo yemodule.
Sekureva kweIEA, kubva 2019 kusvika 2021, ingangoita 100GW yesolar photovoltaic uye simba remhepo mapurojekiti akahwina mabhidhi asi asati aiswa mukushanda akatarisana nenjodzi yekuvhunduka kwemitengo yezvinhu, izvo zvinogona kunonoka kutumirwa kweprojekiti.
Zvisinei neizvi, kukanganisa kwekukwira kwemitengo yezvinhu pakuda kwesimba idzva kune zvishoma.Hurumende hadzisati dzatora shanduko huru yekukanzura ma tender, uye kutenga kwemakambani kuri kutyora imwe rekodhi yegore negore.
Kunyangwe paine njodzi yemitengo yakakwira yenguva refu, IEA yakataura kuti kana mitengo yezvinhu uye yekutakura ikareruka munguva pfupi iri kutevera, kuderera kwemutengo we solar photovoltaic kuchaenderera mberi, uye kukanganisa kwenguva refu pane iyi tekinoroji inoda. pamwe ichavawo duku zvikuru.
Ichaita renewable energy redefine tekinoroji...
Nzira yekuenderera mberi nekubviswa zvishoma nezvishoma kwe...
Mwero wekukura kweUS solar indust...
Kurudzira musanganiswa wakakwana wemarasha a...
Chirevo cheIEA: Global PV inowedzera 156GW muna 2021!...
Runhare: +86 13459204925 (John Liu)
Runhare: +86 13123388978(Eleanor Lin)
Solar Light Bulb, Solar Led Mafashama Mwenje, Waterproof Solar Mwenje, Solar Street Light Pole, Solar Powered Tochi, Swimming Pool Solar Mwenje,
Bata: Mr. John Liu